No hanampiantsika ny an'izao tontolo izao nanomboka tamin'ny 1995 mitombo
Toaka Production amin'ny Non-mahandro sy tsy saccharification teknolojia
Complete fototra ny tanteraka ethanol
Complete fototra ny toaka famokarana
Complete fototra ny DDGS
Complete fototra ny rano CO2
Complete fototra ny hydroéthylamidon famokarana siramamy
Complete fototra ny fako fanariana rano
Fitsipika sy fitsipika
Jinan Keyu Zhanye Teknolojia & Equipment Co., Ltd.
Jinan Keyu Zhanye Fitaovana & Technology Co., Ltd dia avo sy ny teknolojia vaovao orinasa. Izany dia nanorina ny mpampianatra, mpanolo-tsaina, manam-pahaizana manokana ny Shandong Light Industry University & Shandong Fermentation Design Institute sy ny vondrona ny zokiolona injeniera. Za-draharaha izy ireo tany an-tsaha ny toaka sy ny CO2. Ny atrikasa mitana 50.000 m2. Ny orinasa no misy ao an-tanàna loharano tsara tarehy Jinan, dia ny ara-politika, ara-toekarena sy ara-kolontsaina afovoan'i faritanin'i Shandong.
Nanomboka tamin'ny 1995, Keyu Company efa niandraikitra ny famolavolana, fanorenana ara-teknika sy nanome asa ho an'ny maro distilleries, ethanol manufactories sy ny orinasa simika any Shina.
Keyu orinasa nanaiky ny famolavolana, fitaovana ara-teknika fanamboarana sy ny asa fanompoana ho 100,000T / Y tsara toetra fihinana tetikasa toaka, 15,000T / Y acetic asidra tetikasa, 10,000T / Y CO2 tetikasa sy ny toaka fako tetikasa fikarakarana ny rano ao Pakistan. Efa mahomby vita 60.000 T / Y solika sy ethanol tetikasa 30.000 T / Y proteinina fahana (DDG) tetikasa any Rosia. Izahay koa planina sy hanorina ny toaka sy mifandraika loatra tetikasa ho an'ny mpanjifa Amerikana. Ny tena tsara kalitao sy ny asa fanompoana no tena natolotry ny vahiny mpanjifa.
Keyu Company foana miorina amin'ny "amin-kitsimpo hanompo ny mpanjifa" ny manatanteraka ny tetikasa manaraka ireto na amin'ny an-tokantrano sy ampitan-dranomasina.
A. manatanteraka ny endrika ankapobeny, fanamboarana na fanavaozana ara-teknika ny asa ho an'ny 3,000-500,000T / Y-tsara kalitao alcohols (GB10343-2008).
B. manatanteraka ny asa fanorenana ny 1,500-300,000T / Y tanteraka ethanol (molekiolan'ny sivana fandriana fomba).
C. Design sy hanome fitaovana ho an'ny manavotra sy hamokatra sakafo tsara-tsara ho an'ny kilasy CO2 distilleries / ethanol fototra. Standard ny GB10621-2006 efa tonga.
D. Supply tanteraka ny teknolojia (mandroso ny teknolojia eto an-tany) sy ny fanorenana asa fanompoana hamokatra granuleprotein fahana (DDGS) ho an'ny distilleries / ethanol fototra izay mampiasa ny katsaka sy ny vary toy ny fitaovana.
E. Omeo ny "vinasse fanatanterahana aotra" teknika, izay mandroso ny teknolojia ao Shina.
F. Omeo ny teknolojia sy ny fitaovana ho an'ny distilleries / ethanol fototra mba hitondra ny vinasses ranon-javatra tsara, afaka ny notrohinao mbamin'ny faikany wastewater hitsena ny "Integrated Wastewater marary mitsika Standard" (GB18918-2002).
G. Design sy ny fanamboarana fitaovana ho an'ny famonjena ny rano tetikasa, ka mihena ny rano noho ny fandaniana mba 20m3 mamokatra iray taonina toaka.
H. fanamboarana ny fitaovana manokana ho an'ny indostria mazava sy ny orinasa simika
Ny orinasa tsy manome ny avo-teknolojia vaovao sy avo lenta ny fitaovana, fa manome ny tena tsara ihany koa rehefa avy-fanompoana varotra. Fiofanana ara-teknika sy ara-teknika ny fiainana manontolo fanompoana-dia omena, rehefa vita ilay tetikasa ihany koa.
Ny asa fitoriana dia ny hanorina mpanjifa fahafaham-po miaraka amin'ny teknolojia ambony-ambony, ambony-fitaovana ambony, ambony-bola ambony nitsangana sy ambony-ambony fanompoana.
Jinan Keyu Zhanye Fitaovana & Technology Co., Ltd dia avo sy teknolojia vaovao no naorina enterprise.It ny mpampianatra, mpanolo-tsaina, manam-pahaizana manokana ny Shandong Light Industry University & Shandong Fermentation Design Institute sy ny vondrona ny zokiolona injeniera.